१० करोडको चिठ्ठा - E Net Nepal
Home Jokes १० करोडको चिठ्ठा
१० करोडको चिठ्ठा
E NET NEPAL 9:20 AM Jokes,
एकपटक चतुरेलाई १० करोडको चिट्ठा परेछ । कम्पनीले चतुरेलाई अचानक त्यो कुरा बताउँदा चतुरे खुसि ले मर्ने सोचेछ । त्यसैले यो काम कम्पनीकै एजेन्ट धतुरेलाई दिएछ । आदेश दिईएछ की यो कुरा चतुरेलाई यस्तरी बताउनु की चतुरे खुसिले नमरोस । अब धतुरेलाई पर्यो आपत त्यसैले धतुरेले त्यो काम आफ्नी छोरीलाई दिएछ धतुरेकी मस्त तरुनी छोरी चतुरेकोमा गएर भनिछ,
धतुरेकी छोरी: "चतुरेजी, सम्झनुस तपाईलाई १ करोडको चिट्ठा पर्यो तपाई के गर्नुहुन्छ ?
चतुरे: "म त एउटा घर किन्छु ।
धतुरेकी छोरी: "सम्झनुस तपाईलाई ५ करोडको चिट्ठा पर्यो तपाई के गर्नुहुन्छ ?
चतुरे: "म काठमान्डौमा एउटा घर किन्छु । अनि एउटा राम्रो ब्यबसाय पनि सुरु गर्छु । अनि एउटा कार पनि किन्छु र आरामको जिन्दगि बिताउँछु नि, अरु के गर्नु !
धतुरेकी छोरी: "सम्झनुस तपाईलाई १० करोडको चिठ्ठा पर्यो अब चाहिं तपाई त्यो रकम के गर्नु हुन्छ नि ?
चतुरे: "ह्या कस्तो नचाहिने कुरा गर्या भन्या १० करोड चिठ्ठा पर्दै पर्दैन नि ।
धतुरेकी छोरी: "सम्झनुस न, तपाईलाई पर्यो अब के गर्नुहुन्छ नि ?
चतुरे: "यदि त्यस्तो भयो भने पाँच करोड अघि मैले भने जस्तै गर्छु बाकी पाँच करोडचाहिं तपाईलाई दिन्छु ।
धतुरेकी छोरी ठाउँको ठाउँ बेहोस !!!!
By E NET NEPAL at 9:20 AM